विश्लेषण र "Manon Lesko" जे Puccini को सारांश
1731 मा अब्बे Prevost लेखे , प्रेम बारेमा छोटो उपन्यास पछि सबै समय मा, हुन बाहिर गरिएका रूपमा। यसलाई "Chevalier डे Grio र Manon Lesko को इतिहास।" भनिन्थ्यो यो frivolous आँधी सौन्दर्य प्रेम बताउँछ र सबै मेरो हृदय एक सभ्य जवान संग उनको समर्पित। विवरण अपमानजनक थिए, र उपन्यास प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर आफ्नो पढाइ सूची। प्रशोधन पछि, लेखक आफ्नो बीस वर्ष को बदमास विवरण पछि मुद्रित हटाइयो।
उपन्यास को सामग्री
कथा को दुर्भाग्यपूर्ण डे Grio तर्फबाट छ। उहाँले युवा र अनुभवहीन छ, तर गर्दा अध्ययन जसको नाम Tiberzh वफादार मित्र, बन्दछ। यो राम्रो-गऱ्यौ र स्नातक पछि गरिब जवान मान्छे पवित्र आदेश गरे। Sam डे Grio, यो आफ्नो उच्च मूल हुनुपर्छ रूपमा आफ्नो आमाबाबु फर्कन र बाँच्न प्रशिक्षण पछि जा। तर उहाँले एक युवा सुंदरता, आमाबाबुले विहारको पठाउन इच्छुक छन् जो पूरा गर्दछ। जवान मानिसहरू तुरुन्तै, प्रेममा फसे पेरिस गए र विवाह छैन, बस्छन्। त्यसैले हामी "Manon Lesko" को एक सारांश प्रस्तुत गर्न थाल्छन्।
डी Grio केटी को प्रेम देखि उनको टाउको गुमाए र आफ्नो आमाबाबु प्रेम गर्नेहरूलाई बारेमा बिर्सन्छन्। तर फेरि, आफ्नो सौन्दर्य फर्केपछि उहाँले तिनलाई एक समाज प्रसिद्ध धनी कर किसान मा भेट्टाउनुहुन्छ। राजद्रोहको सत्र को Lad स्तब्ध। कथा को लडी ( "Manon Lesko" को सारांश) - यो छ। त्यसपछि हामी आफ्नो बुबाको lackeys आइपुगे र घर उहाँलाई लगे। यो छ महिना, चाहनालाई छ, प्रेम र डाह गरेर सास्ती, को विश्वास Manon यो, त्यो यो भूल थियो भनेर सोच प्रेम गर्नुहुन्छ। Tiberzh आएको र Cavalier सुरु चलाउँदा धर्मशास्त्र persuades। त्यसैले डे Grio फेरि पेरिस पर्छ। उहाँले लगनशील भई Sorbonne मा अध्ययन र लगभग आकर्षक छवि बिर्सनुहुन्न।
त्यो पहिले नै 18 वर्ष पुरानो थियो, र यो पनि अधिक थियो भन्दा सुन्दर भएको छ। त्यो यो अत्यन्तै प्रेम र बिना डे Grio बाँच्न किनभने गर्न सक्दैन, उसलाई क्षमा जन्म देती। निस्सन्देह, सज्जन धर्मशास्त्र र सबै असल योजना बिर्सनुहुन्न र पेरिस नजिकै एउटा सानो गाउँमा आफ्नो damsels संग छोडेर थियो।
हामी एक सारांश प्रस्तुत गर्न जारी। Manon Lesko पैसा ल्याए। त्यो दुई वर्ष तिनीहरूलाई भेला भए। तर त्यहाँ आगो थियो र सबै जलाइदिए। को जुवा घर मा युवा जान्छ जो आफ्नो भाइ संग धोखा परिचय डे Grio। Winnings आशा भन्दा बढी र बाफ फेरि एक ठूलो मार्गमा पेरिस जीवन सुरु हुन्छ। तर तिनीहरू यहाँ सेवकहरू robbed थिए।
Manon दाइ, एक धनी सज्जन उनको परिचय सामग्री उनको लिन तयार छ। भ्रष्ट महिलाहरु को लागि एक आश्रय - तर सौन्दर्य को टाउको अन्ततः जेल मा दुर्भाग्यपूर्ण सज्जन मा परिणाम अर्को योजना, र Manon जन्म हुन्छ।
कथा को अन्त्य
कुमारी अमेरिका मा एक पतित महिला रूपमा पठाएको परिवर्तन र vicissitudes एक श्रृंखला पछि। विश्वासी र मायालु Cavalier निम्नानुसार। नयाँ अर्लिन्स, तिनीहरूले विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तर यो राज्यपाल छोरा को ध्यान आकर्षित। डी Grio एक Duel उहाँलाई हत्या। प्रेमीहरूको भाग्न, तर Manon बिरामी र मर्छ। आफ्नो मृत्यु अघि, त्यो कुनै एक कहिल्यै बाहेक डे Grio, प्रेम बताए। जवान मृत्यु एकदम राम्रो र एउटै अन्त धेरै नजिक द्वारा मारे। तर यहाँ विश्वासी Tiberzh आउँछ र फ्रान्स दुर्घटना लाग्छ। आफ्नो पिताको मृत्यु, र उहाँले केवल एक मूल प्राण पूरा - भाइ। यो "Manon Lesko" को एक निकै छोटो सामग्री निष्कर्ष।
जर्ज ओपेरा। Puccini
ओपेरा र वर्ष को libretto मा काम दुई वर्ष - र संगीतकार 1893 मा ओस्लो मा आफ्नो कृति राख्छ। "Manon Lesko", Puccini गरेको ओपेरा, तुरुन्तै सार्वजनिक र आलोचकहरु द्वारा मान्यता प्राप्त भएको थियो। लेखक 35 वर्ष पुरानो थियो, र त्यसपछि सबै आफ्नो काम रमाउनुहुन्छ देखि।
ओपेरा को libretto तल "Manon Lesko" प्रस्तुत गरिनेछ। चार कार्यहरू सार देखाउने अब्बे Prévost गरेर उपन्यास बाट विवरण मा ओपेरा को षड्यन्त्र छ।
"Manon Lesko", Puccini :. सारांश
पहिलो कार्य मानिसहरू एक हलचल, मजा-भरिएको क्षेत्र मा, एमेयन्स मा सुरु हुन्छ। त्यहाँ एक जवान महान, तर गरिब युवा डेस Grieux छ। उहाँले प्रेम र युवा को सुख बारेमा frivolous madrigal गाउँछन् गर्ने इडमन्ड मित्र सँगसँगै छ। अधिक डेस Grieux, प्रेम मा भएको कहिल्यै छ जो साथीहरूलाई खिसी। तर यहाँ वर्ग मा त्यहाँ जो एक आकर्षक पन्ध्र Manon आफ्नो भाइ-पुराना किशोरी र कर किसान Gerontius सँगसँगै को कोच छ। संयुक्त यात्रा समय को लागि, त्यो जवान सौन्दर्य चोर्न निर्णय र यो चालक लागि तयारी। यसैबीच, Manon हेर्न छक्क परेका, डेस Grieux, अझै पनि उनको पूरा गर्न आ। जवान मानिसहरू भेट्न सहमत हुनुहुन्छ। व्यग्र प्रेम मा des Grieux। आफ्नो ARIA, उत्साह पूर्ण, Manon को आकर्षण बारेमा बताउँछ: "ठीक छ, त्यो आकर्षक छ" (को ARIA अक्सर कन्सर्ट मा सुने गर्न सकिन्छ)।
इडमन्ड डेस Grieux पुरानो Gerontius को योजना बारेमा बताउँछ। जवान मानिसहरू भेट्न गर्दा केटी एक ARIA, कार्य "तपाईं म शब्द वफादार छु, हेर्न"; जवान चाँडै आदेश जो Gerontius र पेरिस लगियो को ढुवानी, मा उनको राख्छ। भाइ, enthusiastically कार्ड खेल्दै, शान्तपूर्वक र cynically संचालक, को माग्नेले डेस Grieux चाँडै लुगा र मनोरञ्जन प्रेम गर्ने उनको बहिनी को थकित प्राप्त हुनेछ भनेर भन्छन्।
पर्दा rises र हामी एक धनी boudoir Manon मा आफूलाई पाउन। यो उनको पोशाक र कोर्नु मदत गर्ने नौकरानियां घेरिएको छ। Mlle Lescaut डेस Grieux संग घरबारविहीन जीवन खडा गर्न, र अब यसलाई पुरानो Gerontius एक धन समावेश गर्दछ। भाइ आउँछ र आफ्नो बहिनी घेरने कि लक्जरी admires। आफ्नो ARIA मा, त्यो प्रसन्न हुनुहुन्छ कि धनी जीवन महिमा गर्छ। तर Manon प्रतिक्रिया डेस Grieux लागि आफ्नो तिर्सना लागि ई समतल प्रमुख भन्छन्। त्यो खुसी थियो यो madrigal (यो उनको घृणित पुरानो मानिस लागि बनेको गर्ने stylization pastorals)। साथीहरू र नृत्य शिक्षक संग उनको भाग Gerontius लागि। सबै उनको द्वारा मोहित, र त्यो minuet एक प्यारा प्रधान विचार गाउँछन्। अन्तमा सबै गएका र त्यहाँ एक डेस Grieux छ। "तपाईं, मेरो प्रेम, तपाईँले" - आफ्नो आँखा Manon विश्वास गर्दैन। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य दोष, तर पनि ardently प्रेम अनन्त छ कि आश्वासन दिए। र यहाँ Gerontius छ।
सुरुमा यो व्यंग्यात्मक छ, तर त्यसपछि, जब दर्पण मा बेब उसलाई आफ्नो पुरानो कुरूप Gerontius को, अनुहार रिस भरिएको, बदला लिन निर्णय देखाउँछ। र प्रेमीहरूले चलाउन सहमत हुनुहुन्छ। यो एक भाइ आउँछ र Gerontius यहाँ dissolute जीवनको लागि Manon पक्रन जिम्मा भएकोले तिनीहरूले हतार गर्न आवश्यक छ कि भन्छन्। यो धेरै लामो रहेको छ, र गार्ड आउँछ। त्यो पक्राउ र सबै निराशाजनक डेस Grieux बाबजुद लगिएको थियो।
तपाईंले पहिले - "Manon Lesko" को सामग्रीको छोटो retelling।
यो छोटो इंटेरमेस्सो र भयावह सुरु। लेह्याभरे बाटो - यो एक नाटक हो। पर्दा rises। प्रारम्भिक बिहान वर्ग मा Manon र डेस Grieux को भाइ छन्। तिनीहरूले ट्रान्जिट झ्यालखानाबाट केटी उद्धार गर्ने बारे सोच्न। भाइ को गार्ड घूस गर्न प्रदान गर्दछ। किनभने जाली को विन्डो मा दुखी Manon देखिन्छ। त्यो, अमेरिका एक जहाज पठाउन तयार अन्य Fallen महिलाहरु संग। सबै उनको आशा डेस Grieux जोडिएको छन्: "प्रिये, तिमी मलाई बचत गर्नुहोस्।" तर चेन सबै महिला, क्षेत्र गर्न ल्याउन। त्यतिन्जेल, अब विदेशी पठाइएका छन् गर्नेहरूको सूची पढ्नुहोस्। यो छलफल वर्ग मा भीड, त्यो sympathizes कसैले कसैको निन्दा गर्नुभयो। Manon जहाज धारण हुनुपर्छ। त्यो प्रिय गर्न हृदयस्पर्शी विदाई छ र घर फर्कन उसलाई सोध्छन्। Des Grieux आफ्नो प्रेमी संग हुन उहाँलाई लिन कप्तान जन्म देती। आफ्नो आवाज टियर सुनिन्छ। कप्तान तिनको बिन्ती द्वारा सारियो र चढ्नु अनुमति दिन्छ। रन डेस Grieux र्याम्प र प्रिय को काखमा मा अप चल्छ। संगीतकार masterfully सबै सांगीतिक लाइन intertwined, र तिनीहरूले एक दृश्य मा गरिएका गतिशीलता भरिएको छ।
अमेरिका। मरुभूमिमा Manon र डेस Grieux। को बस्ती को मुख्य छोरा जवान सौन्दर्य पक्रन निर्णय किनभने तिनीहरूले शहर देखि भागे, र डेस Grieux को बलात्कारीबाट मारे। उतरती साँझ रात आउँदै छ। ती दुवै अन्तिम सेना बाहिर लक्षविना हिड्नु। वरिपरि कुनै आश्रय, कुनै भोजन, कुनै पिउने छ। रूपमा डेस Grieux द्वारा समर्थित Manon मात्र लामो जान सक्नुहुन्छ। तर चाँडै त्यो डेस Grieux, उनको लागि डर संग रोइरहेका, जीवन Manon गर्न ल्याउन प्रयास faints। जब उनले अप wakes र आँसु मा उनको प्रेमी देख्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो आँसु उनको मन जलेको भन्छन्। त्यो पिउनका लागि सोध्छन्। Des Grieux, हिचकिचाहट, पानी खोजी गर्न जान्छ। उहाँले भारी प्राण मा कसरी यो एकाकीपनको Manon खडा हुनेछ? एक neschasnaya केटी, एक्लै छोडेर रेभ गर्न थाल्छ। यो यस्तो डरलाग्दो सपना तिनीहरूलाई दुवै ल्याएको छ जो आफ्नो सौन्दर्य, को श्राप पठाउँछ। Manon यसलाई कमजोर र कमजोर, मृत्यु को डर छ। उहाँले डेस Grieux फर्के। उहाँले केही फेला परेन।
Manon उनको वरिपरि आफ्नो हात राख्नु उहाँलाई सोध्छन्। त्यो यो मर्न हुन भने, यो केवल आफ्नो काखमा छ, गर्न चाहन्छ। त्यो फेरि तिनले उसलाई प्रेम, र त्यो प्रेम कहिल्यै मर्नेछन् भनेर, सज्जन बताए। Des Grieux, मरेको प्रेमिका पकड sobbing। यो "Manon Lesko" समाप्त हुन्छ। Puccini गरेको ओपेरा एकदम साहित्यिक मूल र Massenet गरेको ओपेरा फरक छ।
संगीत अर्थ लेखक
पहिले, लेखकको मूल पाठ को अनुरोध मा librettists वसन्त tensioned प्लट बनाएर, कम छ। ओपेरा को भाग भावनात्मक उठाने र मेलोडिक प्रतिभा को एपिसोड भरिएको छ। यो भोल्टेज प्राण शान्त संगीत विकास संग interspersed। आफ्नो ओपेरा duets, भावना को पूर्ण, भावुक ARIA Chevalier डेस Grieux बदलिएको र उजुरी Manon को प्राण मा मर्मज्ञ मा। सारा को चौथो कार्य एक ठूलो युगल रूपमा निर्माण गरिएको छ।
पहिलो पहिचान ओपेरा Puccini -। यो ओपेरा "Manon Lesko", हामी छलफल जो एक सारांश छ।
तपाईंको आफ्नै सुन्दर पुष्प ढाँचा कसरी सिर्जना गर्ने
अचम्मको रचनात्मकता र मरियम Pryimachenko को जीवनी
कसरी एक स्कूल आकर्षित गर्न? सुझाव तथा तरिकाहरू
एनिमेशन सिर्जना, "Maynkraft"
ओवन मा खट्टा क्रीम मा स्वादिष्ट आक्षेप
विस्थापन संग टखने भंग: पहिलो सहायता उपचार
ग्रेनाइट को घनत्व - यसको स्थायित्व गर्न प्रमुख
के बाट भुइँमा फिरोजा पोशाक लगाउन? फैशन शैलीहरू
यो श्रृंखला "कुल चिकित्सा 2" अभिनेता। "कुल चिकित्सा 2": षड्यन्त्र र वर्ण
ठीक आफ्नो अवकाश योजना